Mahazoarivo: notsinjovina manokana ny zokiolona sy ny ankizy | NewsMada
Nijery manokana ireo loharano nipoirana sy ireo hoavin’ny firenena ny fiadidiana ny Primatiroa, tamin’ny fetin’ny fahaleovantenan’i Madagasikara iny. Notolorany fanomezana ireo zokiolona sy ny ankizy manidika, monina eny amin’ny fokontanin’i Mahazoarivo, toerana misy ny primatiora.
Tonga nanotrona sy nitarika ny fotoana ny sekretera jeneralin’ny governemanta, Razanadrainiarison Rondro Lucette, izay nisolo tena ny Praiminisitra, Ntsay Christian. “Mbola ady sarotra ho antsika izany fahaleovantena izany, satria mbola maro ny olona sahirana ary ao anatin’ny adidin’ny mpitondra ny mitsinjo hatrany ny hampifaly sy hanasoa ny mpiara-monina ary ny mpiray tanindrazana”, hoy izy.
Izay indrindra ny antony nanomezana tombony manokana ireo zokiolona, raiamandreny, sy ireo solofo dimbin’ny ala, hoavin’ny firenena rahatrizay. Nambaran’ity tompon’andraikitra ity fa rariny loatra raha miara-paly amin’izy ireo, tamin’iny Asaramanitra iny.